July 2020 – Let Pan Daily
Let Pan | July 31, 2020
အလှမကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးရယ်လို့တော့ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ လှချင်တာ အမှားတစ်ခုတော့မမှားပါဘူး။ ခုဆိုရင် အလှအပတွေက နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ခေတ်မီလာသလို၊ ပိုပြီးတော့လည်း အသစ်အဆန်းတွေများပြားလာကြပါတယ်။ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးနီးပါးကို လှအောင်လုပ်လို့ရနေပြီဖြစ်သလို၊ အလှဆင်စရာ ပစ္စည်းတွေလည်း အရမ်းကို များလာပါပြီ။ခုဆိုရင် လူတော်တော်များများဟာ ရောင်စုံမျက်ကပ်မှန်လေးတွေကို အမြင်အာရုံအားနည်းလို့ပဲဖြစ်စေ၊အလှအဖြစ်ပဲဖြစ်စေ တပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန်တပ်တိုင်း အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့တော့
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော နေတိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လတ်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေ မြောက်များစွာ ရိုက်ကူးနေရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့နေတိုးက ပျိုပျိုမေလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲချစ်ခင်ခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး ပရိသတ်တွေ အပေါ်မှာလည်း ဖော်ရွေရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ နေတိုးက တကယ့်ကိုလူချစ်လူခင်ပေါများနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ မြောက်များစွာ ရိုက်ကူးနေရသလို သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်
မန္တလေးသားများ ပိုက်ဆံပေါ ချက် … (၉) သိန်းကျော်ကျော် ကို ကျုံးဘေး လွန့်ပစ် သွားတယ်…
မန္တလေးသားများ ပိုက်ဆံ ပေါချက် ၉ သိန်းကျော်ကျော် ကို ကျုံးဘေး လွန့်ပစ်သွားတယ်…. ပိုင်ရှင်သိ့အောင် အော်ပေး ကြပါ အူးအမျိုးတွေ…. ကျုံးဘေး မနက်တိုင်းပြေး အမှိုက်များ တွေ့လျှင်ကောက် ၍ ပုံထဲ သို့ နိုင်ငံကြီးသား ပိသ နေသည် မှာမကြာသေး … သိုသော် ယနေ့မနက် ခင်းတွင် အမှိုက်
ပြည်သူ့အချစ်တော်လေး မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင် တစ်ယာက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေအိမ်စည် က အနုပညာ လမ်းခရီးကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ သူလေးပါနော်..။ ရွှေအိမ်စည် က ယခုမှာဆိုရင် ကြော်ငြာတွေကို များစွာ လက်ခံရိုက်ကူးလာသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမဟာ စွဲမက် စရာကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို အမြဲလိုလို ဝတ်ဆင်တက်တာကြောင့် ပုရိသတို့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် “ဝက်သားဟင်း”
ထမင်းချက်ဆောင်အတွင်းသို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရဲဘော် ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်သလဲ ဗိုလ်ချုပ် ဒီကနေ့ ဝက်သားဟင်းချက်ပါတယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ဒါနဲ့နေပါဦးရဲဘော် ရဲဘော်ချက်နေတဲ့ဝက်သားက ဒယ်အိုးကြီးထဲက ဝက်သားနဲ့ ဒန်အိုးထဲကဝက်သား မတူဘူးလား အတူတူပါပဲ ဗိုလ်ချုပ် ဒါဆို ဒန်အိုးနဲ့ချက်တာနဲ့ ဒယ်အိုးကြီးနဲ့ချက်တာ ဘာကွာနေလို့လဲ ဒီလိုပါဗိုလ်ချုပ် ဒယ်အိုးကြီးထဲက ဝက်သားတွေက ဗိုလ်မှူးကြီးစားဖို့ ကောင်းကောင်းစပါယ်ရှယ် သီးသန့်ချက်တာပါ
အဲဒီကျောင်းတွေကို ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့ မညီလည်း ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက အခြေခံပညာကျောင်းတချို့၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့က အခြေခံပညာကျောင်းတစ်ချို့နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက သွားလာရခက်ခဲပြီး ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ဒေသတွေက အခြေခံပညာကျောင်း တစ်ချို့ စုစုပေါင်း ကျောင်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းချက်နဲ့ ညီ၊မညီ မစစ်ဆေးနိုင်တော့ဘဲ ဖွင့်လှစ်သွားတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကျောင်းပေါင်း ၁၀၀
ပရိသတ်ကြီးရေ…..မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေကနေ တစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းနုသွေးဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးနဲ့ပရိသတ်တွေစတင်သတိထားမိလာခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ဟာ အခုလက်ရှိ မှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပါ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေမြင့်မိုရ်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအတော်များများဟာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တာပါ။ သူမဟာမိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးပြီး အေးဆေးစွာနေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူပါ။ မေမြင့်မိုရ်ဟာ မိတ်ဆွေ
မော်စကို ၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် ။ ။ ရုရှားနိုင်ငံ ဟာ Covid-19 ကာကွယ် ဆေး ရှာဖွေမှု မှာ စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ တယ် လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေ က ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့တဲ့ အတိုင်း လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂
ရင်ခုန်စရာကောင်း တဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေ နဲ ချစ် ဖို့ကောင်း နေတဲ့ ဟန်နာယူရီ
အလှဖန်တီးရှင်မလေးဖြစ်တဲ့ ဟန်နာယူရီ ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာတစ်ခုကိုအခိုင်မာရပ်တည် ထားနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်ပညာမှာလည်းထူးချွန်တဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း Music Album တွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာနေတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမဟာ ကိုရီးယား မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်လိုလည်း ချောမော လှရက်လွန်းနေပြီး သွယ်လျကျစ်လျစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေအပြင် ဖြူဖွေးနုဖက်နေတဲ့ အသားရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူလေးပါနော်..။
လူကြည့် များနေတဲ့ ရွှေညီကို တို့ရဲ့ အက ရုပ်သံဖိုင် မိုက်တယ်ဗျာ
ရှားနိုင်ငံ၊ ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့ ရှိ အိုကီယမ် စင်တာတွင် ပြုလုပ်သည့် “လူငယ်ပွဲတော် (Children of the World 2019)” သို့ (Private Teachers Association နှင့် ပူးပေါင်း၍) တက်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အနက် မြန်မာလူငယ်အဖွဲ့သည် Live, Create & Dream ဟုအမည်ပေး ထားသော အနုပညာပြိုင်ပွဲတွင်